ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲ(သို့)ရှမ်းခေါက်ဆွဲ | Danuphyu Daw Saw Yee (London)
ဒီနေ့ အလုပ်နားတယ်။ အိမ်မှာတော့မနားအောင်ချက်ရမဲ့နေ့ပါ။ မနက်ကိုယ်အိမ်မှာရှိရင်ယောက်ျားကို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေးကျွေးချင်ပါတယ်။ ဟိုတနေ့ကအမအလတ်နဲ့စကားပြောတော့ သူက သူတို့မိသားစုအိမ်ထောင်သက်တလျှောက် အမေမပါပဲသွားတဲ့ ခရီးဖြစ်တဲ့ မမကြီးရှိတဲ့လားရှိုးသွားတောလားအကြောင်းပြောကြပါတယ်။ ဒါတောင် ပြန်လာတော့ အမေ့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းလေး၂တောင်လောက်စူထွက်နေတာ ၃ရက်လောက်ခံလိုက်ရပါတယ်တဲ့။ အမေက သားသမီးတွေခရီး သွားရင်သူပါလိုက်ပြီး ဘာဝယ်ဝယ် ဘာစားစားအကုန် လိုက်ရှင်းချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာတွေးမိပါတယ်။ ဒါမျိုးကို လုံးဝမညင်းတတ်တဲ့ ငါကအမေနဲ့အဝေးမှာနေရတယ်လို့လေ။ အဲဒီအကြောင်းတွေပြောကြရင်းနဲ့ မမလေးက ငါလမ်းမှာဘာဝယ်စားစားနင့်ကိုသတိရတယ် ညီမလေးရယ်တဲ့။ ဪတို့မိသားစုနယ် လွမ်းတာတောင် အစားအသောက်နဲ့မှ လွမ်းရတယ်လို့ တွေးပြီရီချင်မိသေးတယ်။ သူက ဒီ ရှမ်းခေါက်ဆွဲ(သို့) ဆန်ဖွယ်ခေါက်ဆွဲ (သို့) ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲအကြောင်း ပြောမိတော့ မစားရတာလဲအတော်ကြာပြီးဆိုပြီး ဒီနေ့မနက် မနက်စာလေးပါ။ ဆန်ခေါက်ဆွဲကို အလုံးလေးတွေမရလို့အပြားသေးသေးပဲ ဝယ်လာပါတယ်။ Rice stick နဲ့မတူဘူးနော်,rice noodle ကတကယ့်ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲအရသာအတိုင်းပါပဲ။
-ကြက်အသား ၃၀၀ ဂရမ်
– five spice powder ၁ဇွန်း(အချိုဇွန်း)
ကြက်သားကို ကြာညို(ပဲငံပြာရည်အကြည်) ၁ဇွန်း(စားပွဲတင်)၊ five spice powder ၁ဇွန်း(အချိုဇွန်း)၊ ကြက်သားမှုန့်၁ဇွန်း(စားပွဲတင်)၊ သကြား၁ဇွန်း(စားပွဲတင်)တို့ဖြင့်နယ်ထားပါ။
ဆီပူတွင် ထောင်းထားပြီးသား ကြက်သွန်နီ၊ ဖြူများ ဆီသတ်ပြီး ရွှေဝါရောင်သန်းတဲ့အခါ ကြက်သားလေးများ ထဲပြီးလုံးပါ။ ရေလီတာဝက်ခန့်ထဲ့ပြီးအဖုံးအုပ်ထားလိုက်ပါ။ ဆီပြန်ရင်ရပါပြီ။
ဆီပူတွင် နှမ်း၂ဇွန်း(စားပွဲတင်) ထဲ့ကာ ခွက်တခွက်ထဲဖယ်ထားပါ။
ဆီတိုဖူး ၃တုံးလောက် ရေနွေးတဇွန်းခန့်ထဲ့ဖျောထားပါ။
ပဲရွက်အစား Spinach ကိုသုံးပါတယ်။ရေနွေးဖျောထားပါတယ်။
ကြက်ပြုတ်ရေပူပူတည်ထားပါ။ ပွက်ပွက်ဆူရင် ငရုတ်ကောင်းခတ်ပါ။
မုန့်ပန်းကန်တွင် ဟင်းရေပူပူတွင်နှစ်ထားပြီး နူးနေသောဆန် ခေါက်ဆွဲ တပန်းကန်စာ ထဲ့ပါ။ ကြက်သားဟင်း(လိုသလောက်)၊ဆီတိုဖူး ၊ မြေပဲစံ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်၊ ရှောက်ကောဆီချက် တို့အနဲငယ်စီ ထဲ့ပါ။ ဟင်းရေပူပူ လောင်းထဲ့ပါ။
spinach ရေနွေးဖျောလေးများထဲ့ပါ။ဟင်းရေပူပူ ၊ရှမ်းချဉ်တို့တွဲ၍ ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲကိုစားသုံးလို့ရပါပြီ။
ဆန်စီးအတွက်ဆိုရင် အိသက်က ဒီခေါက်ဆွဲကိုသုံးပါတယ်။စီးပြီးစားလို့လဲကောင်းပါတယ်။
ခေါက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးနူးတဲ့အခါ အထက်ပါအတိုင်း အရည်ကလွဲ၍အစာပလာများထဲ့ကာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲသုတ်အနေနဲ့စားနိုင်ပါပြီ။ တွဲဖက်အနေဖြင့် ငရုတ်ကောင်းမှုန့်ခတ်ထားသော ဟင်းချိုပူပူ ၊ ရှမ်းမုန့်ညင်းချဉ်( မရှိရင် kimchi ကိုသုံးနိုင်ပါတယ်) စားသုံးနိုင်ပါပြီ။
18 comments on “ရေစိမ်ခေါက်ဆွဲ(သို့)ရှမ်းခေါက်ဆွဲ”
11/05/2012 @ 1:33 am
မမအိ ရေ … အကြိုက်ဆုံး အစားအစာလေး ကို နည်းစနစ်ကျကျ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူး ချစ်မမ ရေ … အရင်အိမ်မှာလုပ်စားရင်နည်းမကျဘူးဗျ။။။
11/05/2012 @ 12:35 pm
လုပ်စားကြည့်ပါ ချိုရေ ။ မ လဲ မ အမ မမကြီး ရှမ်းပြည်ရောက်တော့မှနည်းလေးတွေသိလာတာ 🙂
11/05/2012 @ 2:02 am
ဖတ်နေရင်းနဲ့ သွားရေ ၂ခါမျိုချလိုက်ရတယ်၊ အားတဲ့ရက်ချက်စားဦးမယ်။ မုန့်ဦးနှောက်လေးလဲ မကျေပွဲနွဲရဦးမယ်။ ဟဲဟဲ
လုပ်စားကြည့်ပါ zarchi yay 🙂
11/05/2012 @ 10:04 pm
12/05/2012 @ 12:18 am
ပုံတွေနဲ့ရှင်ပြတော့ ပိုပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ် ချက်စားဦးမယ်
12/05/2012 @ 3:45 am
Thanks, ma I like it very much.i wish youahealthy life.
14/05/2012 @ 2:35 pm
27/05/2012 @ 9:48 pm
Dear ma ei thet, thank you so much for sharing all the receipe..I can learn how to cook and beagood ein-shin-ma..I’ll try to cook it again..once again,thank you so much..May you always be happy :))
28/05/2012 @ 6:39 pm
28/05/2012 @ 6:50 pm
welcome and thanks for your wish 🙂
31/08/2012 @ 12:01 pm
Ma Ei yay.. What is the English name of shout gaw pat gaw( the black one that you recommend using with cinnamon bark and anistar seed ? Thanks.
17/03/2013 @ 3:38 pm
Soe Soe Myint
29/05/2013 @ 4:35 am
27/09/2013 @ 3:00 am
kyay zu tin per tel ei thet yay
25/06/2014 @ 8:04 am
အင်္ဂလိပ် ဘာသာစကား။ တစ်ဆိတ်လောက်
22/07/2014 @ 9:59 pm
YES, WHEN I WILL HAVE TIME I WILL 🙂
23/07/2014 @ 8:23 am
LeaveaReply to Kyaw Htun Cancel reply